खैरो र सेतोमध्ये कुन अण्डाले स्वास्थ्यलाई फाइदा पुर्याउँछ ? जानिराखाैँ - ज्ञानविज्ञान
अण्डा एउटा यस्तो सुपरफुड खाना हो जसमा प्रोटिन, क्याल्सियम, ओमेगा ३, फैटी एसिड भिटामिन ए र बी भरपूर मात्रामा पाइन्छ । दिनहुँ खण्डा खानाले गम्भीर रोग लाग्नबाट मान्छेलाई जोगाउँछ । अण्डा खानाले हड्डी मजबुत बनाउँछ । तर, धेरै मानिसलाई खैरो र सेतोमध्ये कुन चाहिँ अण्डा स्वस्थकर हुन्छ भन्ने जिज्ञासा उठिरहन्छ ।
डाइटिसियनका अनुसार अण्डा दुई किसिमको हुन्छ । एउटा, लोकल अर्को पोल्ट्री । लोकल अण्डा खैरो हुन्छ । पोल्ट्री फर्मको अण्डा सेतो हुन्छ । खैरो अण्डा सेतोभन्दा बढी स्वस्थकर हुन्छ । त्यसैले धेरै मानिस लोकल अण्डा खान मन पराउँछन् ।
खैरो अण्डामा प्रोटिन, कोलेस्ट्रोल र क्यालोरी धेरै पाइन्छ । त्यसैले लोकल अण्डा अलि महँगो हुन्छ ।
Don't Miss it किचेनमा खाना पकाउँदा महिला र पुरुष दुवैलाई उपयुक्त हुने केहि टिप्स जनिराखाैँ
Up Next शरिरका यी अंगहरु बारम्बार नछुनुहोस्, जसले निम्त्याउँछ संक्रमणको खतरा
पेटको रोगको उपचारका १० घरेलु उपायहरु
१. दैनिक खानाअघि एकदाना अमला खाने, बेलको पाकेको गुदीको सर्वत सेवन गन । २.खानासँग सलादको रुपमा प्याज र अदुवाको टुक्रा…